ဖုန်းနံပါတ် Block လုပ်နည်း | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » သင်၏ Android ဖုန်းပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ် Block ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သင်၏ Android ဖုန်းပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ် Block ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? APK ကို
သင့်ရဲ့အလုပ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အထွတ်အထိပ်နာရီမှာ telemarketers နှင့်သူစိမ်းကနေမလိုလားအပ်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပင်ပန်းနေပြီလား သင်သည်လက်ျာရာအရပျမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများနှင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူထိတွေ့ရတဲ့မှကြွလာသောအခါ Android စမတ်ဖုန်းများကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောဖို့အထောက်အကူပြုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ခေါ်ဆိုသူများအတွက်ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့လူတွေနှင့်ချစ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကနှောင့်အယှက် telemarketers, Spam တွေကို, သူစိမ်းများနှင့်ဖွင့်ကိုအနှောင့်ရှက်ချင်သူဖြစ်ကြ၏။ သင်သည်ထိုသူတို့လာမယ့်အချိန်ကိုရင်ဆိုင်ရချင်ကြဘူးဆိုပါကသူတို့ကိုပိတ်ဆို့ဖို့အချိန်ပါပဲ။ ဒီလမ်းညွှန်တှငျကြှနျုပျတို့သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသွားနေကြသည်။
ပုံမှန်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူဖုန်းနံပါတ် Block လုပ်နည်း
အားလုံးနီးပါးနောက်ဆုံးပေါ် Android စမတ်ဖုန်းများဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ဦးက default အင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ ဤ action လုပ်ဆောင်ရန်မတိကျတဲ့လမ်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကသူတို့ကိုယ်ပိုင် OS ကိုအရေခွံနှင့်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိသည်။
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပိတ်ဆို့ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိရိယာမှကိရိယာကွဲပြားခြားနားသည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းတစ်ခုတည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ခြေလှမ်းများတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်ကျနော်တို့တစ်နည်းနည်းနဲ့သင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်အချို့ကိုအပေါ်ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုတခုတခုအပေါ်မှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကို Google Pixel သို့မဟုတ် Nokia ကစမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့အစတော့ရှယ်ယာကို Android running ကိရိယာပေါ်မှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါလျှင်နှစ်ခုရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစျခုသင့်ရဲ့ default အနေနဲ့ Google ကဖုန်း app ကိုအပေါ်မကြာသေးခင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရှိခြင်းအပိုင်းကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်ဆိုမှုမဆိုနှင့် option ကိုထိပုတ်ပါ "Block ကိုအရေအတွက်က on" Long ကနှိပ်ပါ။
သို့မဟုတ်သင်ညာဘက်ထောင့်နှင့်ကို select လုပ်ပါ Settings ကိုဖုန်း app ၏ 3-dot menu ပေါ်တွင်သာပုတ်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအ "ခေါ်ရန်ပိတ်ဆို့ခြင်း" option ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပြီးသင်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်များကိုထည့်ပါ။
သင်အမှန်တကယ်သင်ပိုမိုမကြာခဏဟန်းဆက်များကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်နှောင့်အယှက်ခေါ်ဆိုသူများဖယ်ရှားပစ်ရချင်ပါသလား ဤအချိန်, သငျသညျအစားပဲသင့်ဖုန်းမှပိတ်ဆို့ခြင်းထက်တစ်စနစ်တကျလမ်းအတွက်ထိုသို့ပြုမှရှိသည်။ AT & T က, Verizon က, Sprint, T-Mobile ကကဲ့သို့အမေရိကန်နာမည်ကြီးလေကြောင်းလိုင်းအချို့သည်သင်ဤဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြင့်အဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစဉ်းစားရန်သေချာစေပါ။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကကမ်းလှမ်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့် Android သုံးစွဲသူများမှကြွလာသောအခါ Samsung က Android ကိုဈေးကွက်ထဲမှာခြင်္သေ့ရဲ့ရှယ်ယာအတော်ပင်။ Samsung ကလည်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကို Samsung အသုံးပြုသူများအများ၏ဘီလီယံတဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်, သင်ကျိန်းသေသူတွေကိုနှောင့်အယှက်ခေါ်ဆိုသူများရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုအံ့သြလိမ့်မည်။ ဤတွင်ကိုလိုက်နာဖို့ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း -
ဖုန်း app ကိုသွားပါ။
သင်သည်လက်ျာထောင့်အပေါ်ကို "ပို" option ကိုအပေါ်ပိတ်ဆို့နှင့်ထိပုတ်ချင်ပါတယ်အရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
"စာရင်းငွငျးပယျအော်တိုမှ Add" ဟုအဆိုပါ option ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ပိုပြီးတည်းဖြတ်အတွက်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုပယ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်, ရိုးရိုး Setting> ခေါ်ရန်က Settings> အားလုံးခေါ်ဆိုမှုများအောက်မှာ "အော်တိုငွငျးပယျ" ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။
ဒါဟာသင့် HTC ဖုန်းပေါ်မှာမလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤတွင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့အဆင့်များမှာ -
ကို default ဖုန်း app ကိုသွားပါ။
ထို option '' Block ကိုဆက်သွယ်ပါ '' အပေါ်ကိုအသာပုတ်
စာနယ်ဇင်း 'OK' ။
ပြည်သူ့ app ကိုတွင်, သငျသညျကိုလညျးပိတျဆို့ထားစာရင်းထဲကသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်, အမှု၌သငျအမှားကြောင့်အမှုကိုပြု၏။
သင်တစ်ဦး LG ကစမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. နေတယ်ဆိုရင်, လုပ်ငန်းစဉ်ကဒီမှာစာရင်းကအခြားအမှတ်တံဆိပ်ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်ထိပ်ထောင့်တွင်, ရိုးရှင်းစွာ 3-dot အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
'' ခေါ်ရန်က Settings '' သွားပြီး select လုပ်ပါ '' ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုငွငျးပယျ '' ။
သငျသညျရိုးရှင်းစွာ '+' button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ဖို့လိုတဲ့ဂဏန်းထည့်ပါ။
ဂုဏ်ပြုနှင့် Huawei Device များပေါ်တွင်မလိုချင်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုများပိတ်ဆို့
သငျသညျသေးသည့် Huawei ဖုန်းကို အသုံးပြု. မရစေခြင်းငှါပေမယ့် Huawei ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများအကြားဒုတိယရပ်တည်ကြောင်းမှန်သည်။ ဒါဟာဥရောပနှင့်အာရှစျေးကွက်များတွင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ခြေလှမ်းနှင့်အတူဂုဏ်ပြုနှင့် Huawei ဖုန်းများကိုအပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့အလွန်အဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူဖြစ်ပါသည် -
ရိုးရှင်းစွာအ option ကို "Block အဆက်အသွယ် '' ကိုရွေးချယ်ပါနှငျ့သငျသှားဖို့ကောင်းပါတယ်။
Third-Party Apps အသုံးပြုခြင်း
အင်္ဂါရပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကို default ခေါ်ဆိုခသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးသို့မဟုတ်သင်ဖုန်းခေါ်ပိတ်ဆို့ရန်မ default အနေနဲ့အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူဟောင်း Android ဖုန်းကို run နေတယ်ဆိုရင်, မစိုးရိမ်ပါ! အဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ဖို့ဂုဏ်သတင်း app များကိုအချို့ရှိပါသည်။ Google Play တွင်ဒီလိုမျိုး၏ Third-party apps များရာချီရှိပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ကြိုးစားနိုင်ကအကောင်းဆုံးသူတွေကိုတချို့ရှိနေပါတယ် -
blocker Call အချို့ကြော်ငြာတွေနှင့်အတူအခမဲ့သကဲ့သို့သငျကွိုးစားရမယ်အကောင်းဆုံးကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု blocker apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သင် paid version စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်သင့်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိက SMS ကိုသိမ်းထားဖို့ပုဂ္ဂလိကအာကာသရနိုင်။ ဒါဟာခေါ်ဆိုခပိတ်ဆို့ခြင်းများအတွက်မစ္စတာနံပါတ်နှင့်အခြား app များကိုဆင်တူတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
blocker app ကိုလည်း spam များကိုများနှင့်မလိုချင်သောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ် Call များနှင့်လည်းမသိသောနံပါတ်များကိုခြေရာခံရန်ခေါ်ရန်သတိပေးချက်ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူကနံပါတ်များကိုသငျသညျကိုပဌနာခွင့်ပြုပါရန်အဖြူရောင်စာရင်းပါရှိပါတယ်။
မစ္စတာအရေအတွက် မလိုချင်တဲ့ကျမ်းများနှင့်ခေါ်ဆိုမှုများကိုဖယ်ရှားပစ်ရဟာ android ကြော်ငြာတစ်ခု-အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ် blocker App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်လူများအနေဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအားပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် Spam တွေကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ဧရိယာကုဒ်, ဂဏန်းနဲ့တောင်တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သငျသညျမေးလ် voice သို့တိုက်ရိုက်မသိသောနှင့်ပုဂ္ဂလိကနံပါတ်များကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ပင် spam များကိုဒီတော့အခြားလူများကအလွယ်တကူဒီ app ကိုသုံးပြီးသူသတိပေးခဲ့သည်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသတင်းပို့လို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဒီမှာလာ နာမည်ပျက်စာရင်းခေါ်ဆို, အဆက်အသွယ်များစာရင်းကိုပိတ်ဆို့နှင့်သင့်လက်လှမ်းမမီမှသူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအခမဲ့ app ကို။ အဆိုပါအခမဲ့ဗားရှင်းကြော်ငြာတွေထောက်ခံပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းန်းကျင် $2၎င်း၏ပရီမီယံဗားရှင်းဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအခေါ်ဆိုမှုများအမည်ပျက်စာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ဖို့စာရင်းထဲမှနံပါတ်ထည့်ပါ။
သငျသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ, အဆက်အသွယ်, မက်ဆေ့ခ်ျအနေဖြင့်အရေအတွက်က add သို့မဟုတ်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပေါ်သူတို့ကိုထည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာသင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏နာမည်ပျက်စာရင်းအောက်မှာအဆက်အသွယ်စာရင်းပြုစုပြီးတာနဲ့သင်တို့သည်နောက်တဖန်သူတို့ထံမှဖုန်းခေါ်ရပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့နှင့်မလိုချင်တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲကျနော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ကြိုက်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်သံသယရှိသည်ဆိုလျှင်, ငါတို့အဘို့မှတ်ချက်ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးမြန်းချက်မှတက်ရောက်ရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကဖုန်းနံပါတ်ပိတ်ဆို့ block ဖုန်းနံပါတ် android ဖုန်းပေါ်တွင်အဆက်အသွယ်ပိတ်ဆို့ဖို့ဘယ်လို